Kuboshwe owesilisa e-Tanzania ngokusenga ezimithiyo ngoMengameli | Scrolla Izindaba
Kuboshwe owesilisa e-Tanzania ngokusenga ezimithiyo ngoMengameli
Kuboshwe owesilisa e-Tanzania ngenxa yokuthi ukhulume esidlangalaleni wathi uMengameli uJohn Magufuli uyagula uphethwe yi-Covid-19, yize lo mholi ophika i-Covid engakaze abonwe emphakathini isikhathi esingaphezu kwamasonto amabili.
Ngokusho kwe-The Associated Press, uKhomishana wamaPhoyisa esifundeni e-Kinondoni Ramadhani Kingai ukhulume nesithangami sabezindaba ngoMgqibelo wathi, amaphoyisa abophe le ndoda, namanje engaziwa, ngokuveza ukuthi uMagafuli ugula kabi e-Kinondoni e-Dar es Salaam.
“Baningi kakhulu abebelokhu besabalalisa izitatimende ezingamanga,” kusho uKingai. “Sizobabopha bonke.”
Kodwa-ke, uMagafuli unomlando obanzi wokuphika nokungawunaki umthelela we-Covid-19 e-Tanzania, ngakho-ke kungenzeka abone ukumelana kwakhe naleli gciwane njengesizathu esiyihlazo.
Ngasekupheleni kukaMasingana waphakamisa ukuthi imithandazo, ukugquma kanye namakhambi ikhona okungcono kunemithi yokugoma yangaphandle “eyingozi”.
Uhulumeni kaMagafuli ubelokhu ekugwema njalo ukukhuluma ngaleli gciwane, waze wahamba wayolanda ungqongqoshe owayebonakala ukuthi ubuthaka embhedeni wakhe wasesibhedlela ukuzokhombisa esidlangalaleni ukuthi ungumqemane.
Kubikwa ukuthi ezinye izikhulu zikahulumeni wase-Tanzania zike zahaqwa yi-Covid-19, kwathi iphini likamengameli wokuqala wase-Zanzibar, uSeif Sharif Hamad, wabulawa yiyo. Kodwa-ke, uhulumeni wase-Tanzania akazange amemezele imbangela yokushona kukaHamad, okuholele ekutheni abantu baqagele ukuthi ubulawe yi-Covid-19.
Ukungabi khona kukaMengameli akujwayelekile ngokuphelele, njengoba aziwa ngokwenza izinkulumo zomphakathi kaningi kanye nokuvela kumabonakude yombuso kaningana ngesonto.
Imibiko ivele ngoLwesithathu olwedlule yokuthi ugula kakhulu esibhedlela e-Kenya ngemuva kokuhaqwa i-coronavirus.
Umholi weqembu eliphikisayo uTundu Lissu utshele i-BBC ukuthi uMengameli oneminyaka engama-61 uhlaselwe isifo senhliziyo wabe esephuthunyiswa esibhedlela e-Nairobi ukuthola ukwelashwa okuphuthumayo.